साधारण शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्यो नयाँ व्यवस्था - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
साधारण शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्यो नयाँ व्यवस्था
११ पुस २०७४, मंगलवार २२:२१ December 26, 2017 Sanjeep Ghimire
काठमाडौँ । हितग्राही खाता नहुनेले अब साधारण शेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शेयर खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा उक्त खाता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डका अनुसार अझै पनि तीन लाख बढीले त्यस्तो खाता खोलेका छैनन् । हितग्राही खाता नहुनेले निकट भविष्यमा नै आउन लागेको साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयरमा आवेदन दिन नपाउने भएका हुन् ।
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी साञ्जेनले निकट भविष्यमा सीमित साधारण शेयर जारी गर्न लागेको छ । शेयर बिक्रीका लागि नागरिक लगानी कोषलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ ।
यस्तै सहायक बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, सिभिल क्यापिटल र एनएमबी क्यापिटल छन् । कम्पनीले आज सूचनामार्फत साधारण शेयरका लागि अनिवार्यरुपमा हितग्राही खाता (डिम्याट) जरुरी रहेको भन्दै तत्काल खाता खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले आज प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार १०० मूल्य अंकित तीन करोड ६५ लाख कित्ता शेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गरेका सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई ७१ लाख १७ हजार ५०० बराबरको कित्ता शेयर बिक्री गर्न लागेको छ ।
यस्तै, संस्थापक शेयर धनी संस्थाका कर्मचारीलाई १२ लाख ७७ हजार ५०० कित्ता र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीलाई तीन लाख ६५ हजार कित्ता गरी पहिलो चरणमा ८७ लाख ६० हजार कित्ता साधारण बिक्री गर्न लागेको जनाएको छ ।
शेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गत मंसिर २६ गते उक्त कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । बोर्डको नियमअनुसार आस्वा प्रणालीमार्फत शेयर आवेदन दिनका लागि हितग्राही खाता अनिवार्य रहेको भन्दै तत्काल उक्त खाता खोल्न कम्पनीले आग्रह गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र रसुवाको साविक जिविस तथा गाविसका कर्मचारीलेसमेत उक्त शेयर खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी, सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गरेका कर्मचारीले शेयर खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कम्पनीले दोस्रो चरणमा स्थानीय प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आम नेपालीका लागि १५ प्रतिशत साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कूल १४.८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी असारदेखि सो आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै तल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतमाथि पुगेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४२.५ मेगावाट रहेको छ ।
देउवासँग सबैभन्दा बढी आक्रोशित उनकै निकटका नेताहरु, प्रकाशमानसमेत देउवासँग भिड्दै
काठमाडौंमा नक्कली सुन देखाएर ठग्नेहरु बढे, यस्तो छ धन्दा
बैंकिङ कसुर गरेको आरोप लागेपछि पाँच वर्षदेखि फरार किस्ट बैंकका सीर्इओ कमल ज्ञवाली भारतमा गिरफ्तार
एमाले-माके नेताहरु आन्तरीक तयारीमा
१९ वर्षीय म्यादी प्रहरी पूजा धामीले गरिन् आत्महत्या